Mpanakanto Iray Avy Ao Pôrtô Rikô Mizara Ny Fitiavany Taratasy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2013 17:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Português, русский, Español
*Mitondra mankany amina lahatsoratra Espaniola avokoa ireo rohy rehetra, raha tsy misy fanamarihana ankoatra izay.
Nandritra ireo atrikasa nokarakarainy, nanome “fotoana fitsaharana”, na “toque de queda” [en] izay hianaran'ireo mpandray anjara manambotra taratasy mahafatifaty vita tànana, ny mpanakanto iray avy ao Pôrtô Rikô, Aydasara Ortega, mipetraka any New York amin'izao fotoana izao. Manasa ireo mpianatra “hiverina haka ny toerana hita maso sy ara-tsainany avy” i Ortega, ary hampisy zava-miafina indray anatin'ny zavatra foronin'izy ireo amin'ny tànany, amin'ny fotoanany…ary tsy kely izany zava-bita izany.
Mba hahatanteraka izany, mampiasa ireo tambajotra sosialy i Aydasara hanaparitahany ny resaka momba ny hetsi-panentanana kanto ataony ary hifanakaloany hevitra momba ireo fotodresaka mifandray amin'izany. Manoratra bilaogy roa samy hafa ihany koa izy, lomismoquefuesiempreobjeto sy aydasara, izay hampisehoany ireo tambatranà taratasy noforoniny niaraka taminà fahatsapàna lalina sy fahaiza-manao manakaiky ny lafatra indrindra novolavolain'ny tanany manokana.
Mizara ireto sanganasa kanto mampitolagaga ireto ihany koa izy any amin'ireo rakitsary ao anaty aterineto, ary misy sanganasa vaovao mivoaka foana isam-bolana ao amin'ny gazetiboky Cruce. Na ny rindriny ao amin'ny Facebook aza dia navadika ho toerana fanaovana fampirantiana, noho ny dian-tànana kanto foronin'i Aydasara ary zarainy eto. Araka izany, avy amin'ny alalan'ny Facebook, no niresadresahanay taminy ary zaraniay aminao androany.
Manantena izahay fa hankafy izany ianao!
Sanganasa iray avy ao amin'ny andian'asany antsoina hoe “Desde Luego.”
Global Voices (GV): Hafiriana izay ny niasanao tao anatin'ireo bilaoginao?
Mitantana bilaogy roa aho: lomismoquefuesiempreobjeto sy aydasara. Nanomboka ilay faharoa aho tamin'ny 2008. Ho karazana fanomezana noho ny tsingerintaona nahaterahako, nisy olona niteny ahy hoe, “Jereo anie ry Aydasara e, tahaka ny manoratra bokim-piainana ity, afaka mamorona izany amin'ny fombanao ianao, amin'ny endriny izay tianao.” Mba alaivo sary an-tsaina ny handà fanasàna tahaka izany! Noho izany dia nanomboka nanoritra sy nanao sarisarin'ny zotram-pamoronako manokana aho. Taorian'izany, tamin'ny 2009, te-hampifantoka ny iray amin'ireo bilaogiko amin'ireo atrikasa nampianariko aho: savony sy labozia kanto ary koa taratasy vita tànana.
“Efa lasa niampita azy izay rehetra mijery ny ranomasina.” Sanganasan'i Aydasara mipoitra ao amin'ny pejy fandraisan'ny Café de la Pensée
GV: Ahoana ny fomba hanasokajianao ny asanao?
AO: Somary momba ny fiainako manokana ny bilaogy aydasara, satria lasa tahaka ny bokim-piainana izay hiraketako ireo hetsika nanana lanjany teo amiko izany, ireo zavatra mendrika ny homarihina sy hozaraina. Ny lomismoquefuesiempreobjeto kosa dia mifantoka amin'ny hakanton'ny fanamboarana taratasy, izay nanokanako tena manokana hatramin'ny 2008.
GV: Anatin'ireo bilaogy roa ireo, mampiseho ny asanao miaraka aminà teny na fehezanteny avy aminà lahatsoratra ianao. Lazalazao aminay ny zotra fampifandraisanao ireo famintinana ny asa kantonao ireo.
AO: Ny hoe inona no tonga ato an-tsaiko voalohany, ny lahatsoratra sa ny sary? Fanontaniana nanitikitika ahy hatrany izany, nefa tsy zava-tsarotra ankehitriny. Ny tiako tenenina dia ny hoe samy eo izy roa ary miara-maka endrika.
Azoko avy amin'ireo boky “hitako” ireo lahatsoratra sy singa manome aina ny sary rehetra, na dia nieritreritra foana aza izaho fa izy ireo no nahita ahy. Anatin'ireo bilaogy ireo, saika mampiditra litera iray na mihoatra avy amin'ilay lahatsoratra (ary indraindray avy amin'ilay sary) aho, litera izay halofako amin'ny loko miavaka. Mitondra mankany amina rohy Aterineto izay afaka ahitanao ilay lahatsoratra feno ireo litera maloka ireo.
Sanganasan'ny mpanakanto iray ao Pôrto Rikô, Rubén Rivera amin'ny taratasy namboarin'i Aydasara.
GV: Maninona no manamboatra taratasy atao tànana ianao?
AO: Satria mampitolagaga ahy tokoa ny fivoarany sy ny fizotrany. Ny teny “fivoarana” sy ny dikany, “raisina ho fizotran'ny fiovàna ny zava-misy, izay indraindray tsy manaiky izany” (tenin'ilay namako Rubén Rivero), dia famaritana tsara ny hakanton'ny fanamboarana taratasy vita tànana sy ny dikan'izany ho an'ilay mpanamboatra azy.
Manitikitika ny fanamboarana taratasy, mahataraiky, mamandrika ary, indraindray, manome fahafaha-maneho malalaka.
Araka izany, inona no mahatonga ny olona hanao taratasy vita tànana sy hanokana ny tenany amin'izany?
Amin'ny ankapobeny ny olona, mahita ny taratasy tahaka ny fahitany, ndeha atao hoe, ny rivotra. Tahaka ny fanairan'ny tsio-drivotra ny retsika, toy izay ihany koa ny singanà taratasy iray vita tamin'ny tànana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, misy zavatra mampiavaka azy ny zavatra natao tànana. Manome antsika ny fisainan'ilay olona tao ambadik'io vokatra io izany fa tsy ny an'ilay milina, ary manaja izany fisainana izany mihoatra noho ny fivoarana ara-teknolojia vaovao rehetra isika. Zavatra hita amin'ny andavanandro ny taratasy, noho izany dia mihoatra lavitra noho ny zavatra tsy fahita ny taratasy vita tànana, tokana an-tany izany, ary mitondra hafatra ao anatiny.
GV: Lazalazao anay ny zavatra nolalovanao tamin'ny fizaranao ny sanganasanao tany Kalifôrnia, Detroit, New York, ary Pôrto Rikô.
Sary navoakan'i Aydasara Ortega tao amin'ny Facebook
AO: Nanana fahafahana tsara dia tsara aho handranty ny sanganasako sy hanolotra atrikasa[en] momba ny fanamboarana taratasy, izay antsoiko hoe Toque de Queda, ho an'ireo fikambanana samy hafa, ary any amin'ireo toerana rehetra ireo, nahomby dia nahomby ny fanaovana taratasy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, zava-baovao nitondra fahalalana ho an'ireo rehetra nizarako azy ny fanamboarana singan-taratasy vita tànana, sy ny fanodinana izany araka izay hibaikoan'ny saintsika antsika.
GV: Inona ireo dingana manaraka?
AO: Hanome atrikasa maimaimpoana aho ny 27 sy 28 Jolay izay tafiditra ao anatin'ny andiany fahatelon'ny Fetiben'ny Tononkalo ao New York City [en]. Hanome fampianarana amin'ny antsipiriany ny fanamboarana taratasy, miaraka amin'i Rubén Rivera, ny 5-9 Aogositra ao amin'ny Ligin'ny Mpianatra Haikanto ao New York [en].
Hanohy hizara ireo sanganasako sy handefa ny sosokevitra momba ny Toque de Queda any amin'ireo olon-tsotra sy fikambanana maro araka izay tratrako aho. Tsy ho fantatrao mihitsy izay mety ho liana ka handray anjara.